10 Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Boro dwetɛ yɛ ntorobɛnto+ abien. Na bere biara a wopɛ sɛ nnipa no bɔ gua+ anaa wotu kɔ baabi foforo no, wɔnhyɛn ntorobɛnto no. 3 Wopɛ sɛ wuhyia asafo no nyinaa a, wɔnhyɛn abien no nyinaa mfrɛ wɔn mmra ahyiae ntamadan no ano.+ 4 Na sɛ wɔhyɛn biako pɛ a, Israel atitiriw a wɔdeda mpempem ano no mmehyia wo.+ 5 “Sɛ mohyɛn torobɛnto no ma ne nnyigyei kɔ soro ba fam a, ɛsɛ sɛ wɔn a wɔte apuei fam+ no fi ase tu. 6 Sɛ mohyɛn ma nnyigyei no kɔ soro ba fam ne mprenu so a, wɔn a wɔte anafo fam+ no befi ase atu. Bere biara a wɔn mu bi betu no, wɔnhyɛn mma nnyigyei no nkɔ soro mmra fam. 7 “Sɛ morefrɛ asafo no abehyiam a, monhyɛn+ ntorobɛnto no, nanso ɛnsɛ sɛ moma nnyigyei no kɔ soro ba fam. 8 Aaron mma asɔfo no na wɔbɛhyɛn ntorobɛnto+ no, na mubedi ahyɛde yi so daa, mo awo ntoatoaso nyinaa mu. 9 “Sɛ ɛba sɛ mo ne mo atamfo a wɔretan mo ani no+ rekɔko a, monhyɛn ntorobɛnto no mfrɛ dɔm.+ Moyɛ saa a, Yehowa mo Nyankopɔn bɛkae mo na wagye mo afi mo atamfo nsam.+ 10 “Sɛ moregye mo ani+ oo, morehyɛ fã+ oo, morefi ɔsram foforo+ bi ase oo, monhyɛn ntorobɛnto no ngu ɔhyew+ ne asomdwoe+ afɔre a mobɛbɔ no so. Moyɛ saa a, ɛbɛyɛ nkae ade wɔ mo Nyankopɔn anim ama mo. Mene Yehowa mo Nyankopɔn.”+ 11 Afei afe a ɛto so abien, ɔsram a ɛto so abien no da a ɛto so aduonu+ no, omununkum no fii Adanse ntamadan+ no so. 12 Ɛbaa saa no, Israelfo no siim fii Sinai sare so, sɛnea wɔn akwantu nhyehyɛe te,+ na omununkum no begyinaa Paran sare so.+ 13 Wotui nea edi kan, sɛnea Yehowa nam Mose so kae no.+ 14 Mmusua abiɛsa a wɔwɔ Yuda nsraban mu no na wodii kan tui sɛnea wɔn dɔm te.+ Nea na ɔda wɔn ano ne Aminadab ba Naason.+ 15 Nea na ɔda Isakar abusuakuw mu dɔm ano ne Suar ba Netanel.+ 16 Nea na ɔda Sebulon abusuakuw mu dɔm ano ne Helon ba Eliab.+ 17 Afei wotutuu ntamadan no,+ na Gerson abusua+ no ne Merari abusua+ no soa kɔe. 18 Na mmusua abiɛsa a wɔwɔ Ruben nsraban mu+ no nso tui sɛnea wɔn dɔm te. Nea na ɔda wɔn ano ne Sedeo ba Elisur.+ 19 Nea na ɔda Simeon abusuakuw+ mu dɔm ano ne Surisadai ba Selumiel.+ 20 Nea na ɔda Gad abusuakuw mu dɔm ano ne Deuel ba Eliasaf.+ 21 Na Kohatfo no soasoaa kronkronbea+ hɔ nneɛma siim kɔe, efisɛ na ɛsɛ sɛ wosi ntamadan no ansa na wɔaba. 22 Na mmusua abiɛsa a wɔwɔ Efraim nsraban+ mu no tui sɛnea wɔn dɔm te. Nea na ɔda wɔn ano ne Amihud ba Elisama.+ 23 Nea na ɔda Manase abusuakuw+ mu dɔm ano ne Pedasur ba Gamaliel.+ 24 Nea na ɔda Benyamin abusuakuw+ mu dɔm ano ne Gideoni ba Abidan.+ 25 Mmusua abiɛsa a wɔwɔ Dan nsraban+ mu no nso tui. Wɔn na wɔbɔɔ asafo no nyinaa kyidɔm,+ na nea na ɔda wɔn ano ne Amisadai ba Ahiesa.+ 26 Nea na ɔda Aser abusuakuw+ mu dɔm ano ne Okran ba Pagiel.+ 27 Nea na ɔda Naftali abusuakuw+ mu dɔm ano ne Enan ba Ahira.+ 28 Bere a Israelfo ne wɔn dɔm tui no, eyi ne nhyehyɛe a wɔyɛ maa wɔn akwantu no.+ 29 Afei Mose ka kyerɛɛ Hobab a ɔyɛ Mose ase Midianni Reuel+ ba no sɛ: “Yɛretu akɔ baabi a Yehowa kae sɛ, ‘Mede bɛma mo’+ no. Bra ma yɛnkɔ, na yɛbɛyɛ wo yiye,+ efisɛ Yehowa aka Israel ho anigyesɛm.”+ 30 Nanso ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Merenkɔ, na mɛkɔ me man mu,+ m’abusuafo nkyɛn.” 31 Ɛnna ɔkae sɛ: “Yɛsrɛ wo, nnyaw yɛn na wo na wunim sare yi so baabi a eye sɛ yɛtena, enti bɛyɛ aniwa ma yɛn. 32 Sɛ wo ne yɛn kɔ+ a, papa a Yehowa bɛyɛ yɛn biara no, yɛn nso yɛbɛyɛ wo bi.” 33 Enti wofii Yehowa bepɔw+ no ho tuu nnansa kwan, na Yehowa apam adaka+ no dii wɔn anim nnansa hwehwɛɛ baabi a wɔbɛsoɛ.+ 34 Wotu fii wɔn atenae hɔ no, na Yehowa mununkum+ wɔ wɔn so awia. 35 Na sɛ Adaka no sim sɛ ɛrekɔ a, Mose ka sɛ: “O Yehowa, sɔre ma w’atamfo mmɔ mpete,+ na ma wɔn a wokyi wo no nguan mfi w’anim.”+ 36 Na sɛ ɛbɛsoɛ baabi a, ɔka sɛ: “O Yehowa, san bra Israelfo mpempem huhaa+ no nkyɛn.”